उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल: जुनसुकै बेला नेपाल ‘लकडाउन’ मा जानुपर्ने हुनसक्छ – अभियान पोष्ट
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल: जुनसुकै बेला नेपाल ‘लकडाउन’ मा जानुपर्ने हुनसक्छ
काठमाडौं । सरकारका ‘सेकेण्डम्यान’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अचेल व्यस्तता फेरिएको छ । रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अहिले विश्वव्यापी फैलिएको महामारी कोरोना अर्थात कोभिड १९ विरुद्धको लडाइ कसरी लड्ने भन्ने रणनीतिमा केन्द्रित छन् ।
यति सबै सक्रियता र चनाखो हुँदा हुँदै पनि नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन सरकारले सबै सीमाना र विमानस्थल बन्द किन गरिरहेको छैन ? केही दिनलाई लकडाउन गर्दा के बिग्रिन्छ ? यीसहित सरकारको तयारी के कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल यसरी प्रस्तुत भए ।
पाहिलो विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको डरलाग्दो विस्तारले हामीलाई पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा सुक्ष्म अध्ययन गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौं । दोस्रो कुरा जनतालाई सचेत बनाउन के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा काम गर्न थाल्यौं । तेस्रो कुरा चाहिँ,संक्रमण आइहाल्यो भने रोकथामको बारेमा के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी मुलतः केन्द्रित भएका हौं ।
यो सँगसँगै जनस्तरबाट पनि यसमा सहयोग र हातेमालो जाने कुरा सरकारले चाहेको छ । जनस्तरबाट हामीले साथ खोजेका छौं । हामी दिनहँु बैठक बसेर सबै योजनाका साथ अघि बढेका छौं । संक्रमण आउनै नदिने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो र यसमा जनताको साथ चाहिन्छ ।